Huawei P9 Plus Review - News Fitsipika
Ny P9 Plus no tsara indrindra Huawei finday avo lenta no nanao ny daty ... raha tsy manisa ny Rohy 6P. Mila ny fandresena raiki-pohy ny P9 sy manampy fotsiny kely ho azy.
Orinasa Shinoa ny faran'izay-salantsalany flagship lehibe, amin'ny voly fakan-tsary, tsara selfies, snappy fampisehoana sy ny bateria mafy ny fiainana – fa mahamenatra fotsiny momba ny namboarina Android
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Huawei P9 Plus famerenana: avo-kilasy phablet natao indray ny zana-feh rindrankajy” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com ny talata 7 Jona 2016 06.00 UTC
Ny Huawei P9 Plus dia lehibe kokoa dikan-tenin'ny Shinoa mpanamboatra finday avo lenta ny voalohany fanatitra tsara dia tsara. Tsy milaza ho "Plus amin'ny fomba rehetra" - Ary tsy mba manodoka.
Toy ny amin'ny "Plus" ny hafa mpanamboatra dikan 'finday avo lenta, ny P9 Plus mijery toy ny P9 hitsofana ny amin'ny 5% amin'ny photocopier. Tena kely mpiray tam-po dia tsara tarehy, tsara-nanao finday avo lenta, ny P9 Plus toraka izany koa, na dia eo aza ny fampihebana.
Vy vatana amin'ny tsara voakasiky
Ny P9 Plus manana voakasiky kely tsara toy ny mena flaring manodidina ny hery sy ny bokotra kely volomparasy Tint ny vy vatana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Izany dia lehibe kokoa 5.5in efijery, dia kely avo kokoa, midadasika kokoa ary mavesatra. Tonga tamin'ny iray loko – quartz grey – iray tsara tarehy fotsy gunmetal loko amin'ny lantom-peony mahaliana mena manodidina ny fahefana bokotra.
Ny indray dia malama noho ny P9 sy ny lafiny somary boribory, mahatsapa tena mahafinaritra eo an-tànan'i. Toa ary mahatsapa kely rehetra ny Premium farany ambony-finday avo lenta.
Raha oharina amin'ny Samsung Galaxy ny 5.5in S7 Edge, ny P9 1.4mm Plus dia avo kokoa, 2.7MM midadasika kokoa ary 5g mavesatra, fa 0.7mm thinner, raha ny Apple iPhone 6S Plus dia 5.9mm avo kokoa, 2.6MM midadasika kokoa, 0.3MM matevina sy mavesatra 30g, izay tena voamarika teny an-tànan'i, manao izany mafy kokoa mba hiatrehana.
Ny lamba dia 5.5in HD feno AMOLED, izay tsara tarehy, maro loko ary manana inky lalina mainty hoditra. Tamin'ny 401ppi dia tsy tena toy ny Pin-maranitra toy ny mpifanandrina avy amin'ny Samsung sy ny Google, anisan'izany ihany Huawei Rohy 6P, fa manana fijery fijerena lehibe ka hampifaly tena.
Ny fampahatsiahivana alokaloka mitovy iOS Google mihoatra noho ny Android. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Processor: Octa-fototra Huawei Kirin 955
Rafitra fikirakirana: Android 6.0 amin'ny fihetseham-po UI 4.1
Camera: 12MP lafiny roa aoriana fakan-tsary, 8MP anoloana-miatrika fakan-tsary
Fifandraisana: LTE, Wi-Fiac, NFC, SY, Bluetooth 4.2, USB-C sy ny GPS
Snappy amin'ny bateria mafy ny fiainana
Huawei ny herin-mamonjy toe-javatra sy ny Monitors manampy hamantatra olana fampiharana sy manao ny bateria farany intsony. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny P9 Plus nizara ny P9 ny processeur, Huawei ny octa-fototra Kirin 955 Chip, fa manampy fanampiny 1GB ny RAM mitondra azy ho 4GB ary manana avo roa heny ny fitehirizana amin'ny 64GB naorina tamin'ny, raha mbola manana ny karatra microSD slot ho an'ny fanampiana bebe kokoa.
Ny P9 Plus dia snappy, Powered ny alalan 'ny zava-drehetra natsipiko tany izany ka nihazakazaka kely mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any noho ny mpiray tam-po. Battery ny fiainana koa ny tsara, maharitra 38 ora eo ny fiampangana ny manan-tsaina Huawei mampiasa hery drafitry, -jatony ny fampahatsiahivana, 10 ora ny mozika mihaino, dimy ora 'Browsing sy ny fampiharana sy fampiasana ny hafahafa toerana ny sary sy lalao. Ny ankamaroan'ny olona dia azo inoana fa mahazo eo amin'ny fiampangana roa andro. Other, mahery vaika kokoa ny hery-mamonjy fomba azo ampiasaina, ary koa ny fampiharana ny fampiasana Monitors, izay manampy ahi-dratsy avy hery-noana fampiharana.
Tsy toy ny P9, ny fifadian-kanina dia ahitana Plus P9 mamaly ny mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny hafa-faran'ny ambony finday avo lenta, ka topping ny tsy mitaky ora mifandray amin'ny hery famatsiana.
fihetseham-po UI 4.1
EMUI manampy ratsy sisintany ny fampiharana sy manao manan-danja be ny fanovana ny fijery sy ny mihevitra ny Android. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny P9 Plus Huawei dia manana ny farany Android 6.0 Marshmallow miasa rafitra antsoina hoe fihetseham-po UI (EMUI 4.1). Tena mitovy tahaka ny P9 sy ny iOS mitovy Apple, anisan'izany ny manery ny fampiharana rehetra napetraka an-telefaonina mba ho eo amin'ny homescreen, tsy tucked izany ho amin'ny fenitra fampiharana Android vatasarihana.
Ny sasany dia toy ny fijery, ny hafa dia tsy. Misy fanaraha-maso ny fampiharana mataho- tra ianao, izay tsara, ary tsy araka ny bloat-feno toy ny hafa namboarina dikan ny Android, fa tsy tahaka ny tsara tahaka ny faneva Android traikefa.
Ho bebe kokoa mikasika EMUI 4.1, Vakio ny famerenana ny Huawei P9
Ny tondro scanner amin'ny indray dia iray amin'ireo haingana indrindra ary marina indrindra eny an-tsena. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny tondro scanner ao ambadika no tena haingana, marina sy tsara napetraka noho ny haben'ny finday. Tsy indray mandeha aho no fitiliana izany tsy manaiky ny rantsan-. Tsy afaka hamaha ny telefaonina mampiasa ny tondro scanner tsy maka ny telefaonina ny, na izany aza.
Pressure mora efijery
Tsindrio ny rantsan mafy kokoa amin'ny sary ao amin'ny lalan-tsarany rindrambaiko tampoka ny fanandratana loupe. Ny mafy kokoa ianao hanotoanao ny lehibe kokoa ny haavon'ny fampihebana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny P9 Plus dia iray amin'ireo fitaovana Android voalohany mba hanana ny fanerena mora efijery, izay Huawei miantso Press mikasika.
Ny fanatanterahana ny fitaratra, Apple ankapobeny ny fomba teo amin'ny iPhone 6S Plus. Fanindriana mafy ny Huawei fampiharana kisary tampoka haingana ny sasany fihetsika sy ny hitsin-dalana. Fanindriana mafy kokoa ianao mbola mitondra avy hatrany amin'ny zavatra iray ny safidy, toy ny mivantana ny selfie ao anatin'ny fomba fampiharana ny fakan-tsary.
Ireo mpampiasa dia afaka ihany koa ny mifidy ny hanafina ny Fikarohana an-trano, indray, ary vao haingana bokotra nampiasa fampiharana eo amin'ny farany ambany ny lamba sy hampavitrika azy ireo mitombo ny fanerena, na nametraka ny ambony havia na havanana zorony toy ny hitsin-dalana mba hanomboka fampiharana.
Ao amin'ny Gallery App, maika mafy amin'ny sary mitondra ny ny nankalaza loupe amin'ny Zoom mivantana mitanila ho mafy aza ianao mibosesika. Tena manaiky izany, ary mendrika fitaovana kely noho ny nanara-maso antsipirihany, fa ny ankamaroan'ny olona tsy mijery fa mafy ny sary.
Press mikasika Miatrika zava-manahirana mitovy araka ny 3D Apple Touch – sarotra ny hahafantatra izay manohana izany, Zavatra tsy fanohanana antoko fampiharana no tena inoana sy tsy azoko antoka na iza na iza dia hiafara mampiasa azy io. Tsy mavitrika mahazo an-dalana ny sary masina mandady manodidina tamin'ny homescreen, fa azo Novonoiko.
Android mety hametraka teratany fanohanana ny tsindry saropady efijery amin'ny ho avy, fa hitoetra unconvinced misy fampiharana hatreto.
Ny fakan-tsary roa sosona setup ao ambadika: mainty sy fotsy iray fakan-tsary, loko iray. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny aoriana fakan-tsary fiaviana roa "mpiara-hoatr'izany amin'ny Leica" dia mitovy amin'ny rafitra toy ny fakan-tsary manify ny P9, ary toy izany mamokatra tsara tarehy sary, ary dia tena be dia be ny mahafinaritra ny mampiasa.
Ny fakan-tsary dia indrindra doko maranitra, ary manao ny tsara karazana ny foto-kevitra tena miparitaka.
Bebe kokoa eo amin'ny roa sosona fakan-tsary, Vakio ny famerenana ny Huawei P9
Anoloana-miatrika selfie fakan-tsary dia manana haingana family, izay mamela ao amin'ny fahazavana bebe kokoa miaraka amin'ny F-fijanonana amin'ny 1.9, raha oharina amin'ny P9 ny f2.4. Ny fahasamihafana dia voamarika. Selfies mijery maranitra, mamiratra ary-tsipiriany kokoa. Ao amin'ny somary mahantra jiro dia namokatra ny sasany amin'ireo tsara indrindra, selfies-tsipiriany indrindra hitako. Misy isan-karazany koa ny fomba hatsaran-tarehy, fa izy rehetra very fotsiny hiafara antsipirihany.
Ny fakan-tsary Huawei fampiharana no tsara tarehy tsara, fa ny tsy fisian'ny fomba mandeha ho azy HDR dia mahasosotra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny indray dia be malama sy voalambolambo noho ny P9, fa tsy tahaka ny malama toy ny finday avo lenta vy hafa
Double gazety ny boky mihidy bokotra rehefa mba haingana haka sary amin'ny latsaky ny iray faharoa
Huawei fanaraha-maso ny fampiharana-fitaovana tsara indrindra ho an'ny fanaraha-maso ny fahefana tatatra sns
Vitsivitsy-antoko fahatelo fampiharana avy mialoha nametraka, fa azo esorina
Misy foto-kevitra fahatelo-antoko no nanesotra ny ratsy tarehy ka manjary miboiboika manodidina ny fampiharana sary masina eo amin'ny homescreen aho mbola mametraka ny fahatelo-antoko mpandefa toy ny Nova na Google Ary mpandefa
Misy ny IR blaster any ambony ka hifehy ny TV
Ny Huawei P9 Plus dia manokana ny Vodafone ao amin'ny UK amin'izao fotoana izao, manomboka amin'ny £ 500 amin'ny mialoha karama tariff. Vidin-javatra avy amin'ny antoko fahatelo-mpaninjara Miovaova.
In oharina, ny kely P9 ny vidin'ny £ 449, Samsung Galaxy S7 ny Edge ny vidin'ny £ 639, ny Google Rohy 6P vidin'ny £ 449 sy ny Apple iPhone 6S Plus ny vidin'ny £ 619.
Ny fakan-tsary dia lehibe selfie, ny aoriana fakan-tsary fiaviana roa dia Mahafinaritra sy ny fijery ary hahatsapa ny telefaonina dia ambony notch. Ny lamba dia tsy mba tahaka miavaka toy ny mpifanandrina, fa mbola tsara tarehy, raha ny tondro scanner amin'ny indray no arguably ny tsara indrindra eo amin'ny raharaham-barotra.
Izany fotsiny ny EMUI Huawei izay mihazona ny telefaonina indray – tsy tahaka ny mahafinaritra na azo ampiasaina toy ny ankamaroan'ny dikan-Android hafa. Ny sasany dia ho toy izany, tsia.
Mahatsara: Tsara bika, mahatsapa lehibe, tsara selfie fakan-tsary, lafiny roa lehibe aoriana fakan-tsary, mamirapiratra tondro scanner, mendrika ny fiainana bateria, USB-C, IR blaster, microSD karatra fanohanana
Maharatsy ny mifampiresaka: EMUI Tsy tena ho amin'ny rangotra, ratra kely, lamba tsy tsara ho an'ny VR (ambany vahaolana), Press mikasika kely ny fampandriana adrisa fotsiny izany, irery ny Vodafone ao amin'ny UK, tsy bateria removable
USB-C amin'ny fifadian-kanina mamaly ny. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Honor 5X famerenana - be dia be ny telefaonina ny vola, aoka nampidininy tamin'ny mahantra rindrambaiko
Google Rohy 6P famerenana: iray amin'ireo tsara indrindra phablets misy
Android, Article, Gadgets, Huawei, Finday, Famerenana, Samuel Gibbs, Smartphone, Teknolojia
← Man V Machine: Afaka Computers Cook, Soraty ary Lokoy Tsara Kokoa Noho ny Us? OnePlus 3 Review →